महाशक्ति र पछाडि एक शक्तिशाली डचटाउन - डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
महामारी र पछाडि एक शक्तिशाली डचटाउन
प्रकाशित अप्रिल 24th, 2021
का लागि दाता बन्नुहोस् DT2! प्रत्येक डलरले DT2 • डाउनटाउन डचटाउनलाई हाम्रो सबै निवासीहरू, व्यवसाय मालिकहरू, र अन्य साझेदारहरूको लागि एक सफल फ्रिटाउन निर्माण गर्ने हाम्रो मिशनतिर मद्दत गर्दछ।
DT2 ले पनि अब अवसर प्रदान गरिरहेको छ आवर्ती मासिक दान! "स्थायी दान" बटन क्लिक गर्नुहोस् र हामी प्रत्येक महिना स्वत: तपाईंको छनौट रकम प्राप्त गर्नेछौं।
क्रेडिट कार्ड, बैंक स्थानान्तरण (ACH), वा PayPal मार्फत तपाईंको दान पूरा गर्नको लागि तपाईंलाई एक अलग ट्याब वा विन्डोमा डोनरबक्स वेबसाइटमा लगिनेछ। धन्यवाद!
अहिले दान गर्न सक्नुहुन्न? फिर्ता आउनुहोस् dutchtownstl.org/donate कुनै पनी समय तपाईको दिगो अनुदान सेट अप गर्न।
तपाईं २०२० को समीक्षा र तल २०२१ को लागि योजनाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, वा हाम्रो ब्रोशरलाई पीडीएफ ढाँचामा डाउनलोड गर्नुहोस्.
छिमेकीहरू र स्थानीय व्यापारहरूको लागि कडा, भाइब्रेन्ट, लचिलो, र फ्रिभिंग डचटाउन निर्माण गर्दै
२०२० गाह्रो वर्ष थियो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन। एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट र परिणामस्वरूप आर्थिक मन्दीले मानिस र साना व्यवसायहरुलाई नराम्रो पारेको छ।
COVID-19 महामारीले सबैको जीवनलाई बाधक बनायो। यसको बाबजुद पनि, डाउनटाउन डचटाउन एक मजबूत डचटाउन छिमेक निर्माण गर्न जारी। दुबै डीटी २ र छिमेकीहरू अगाडि र निर्माण गति गइरहेका छन् अन्यथा पछिल्ला दशकहरूमा डचटाउनमा देखिएको छैन।
२०२१ उज्यालो देखिन्छ। DT2021 नयाँ चुनौतिहरू लिन, समाधान विकास गर्न, र बाट नयाँ मार्गदर्शनको साथ पहिले भन्दा धेरै पूरा गर्न तैयार छ अर्बनमेन पहल, नवीकरण छिमेकीहरु लाई चासो, र नयाँ समर्पित कर्मचारी.
आज हामी DT2 को मिशन जारी राख्न तपाईंको सहयोगको लागि सोधिरहेका छौं डचटाउन वरपरका आर्थिक विकास र प्रोत्साहन अवसरको सहूलियतले एक संवृद्धि समुदाय र साझा समृद्धिको प्रबर्धन गर्ने। यस मिसनको माध्यमबाट, हामी विभिन्न स्वामित्व आकर्षित गर्न, ठाउँ, ठाउँ, र अनुहारहरू बढाउने, र अधिभोग बढाउने लक्ष्य राख्छौं।
२०२१ मा, हामी हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न र सबैको लागि एउटा बलियो डचटाउन निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने दाताहरूको एक मजबूत आधार विकास गर्न खोज्दैछौं। हाम्रो लक्ष्य यस वर्षको वार्षिक सहयोगी चन्दामा १०,००० डलर उठाउने छ। तपाईको मासिक योगदान $ १०, $ २,, वा १०० को हाम्रो कारणले लामो दूरी जान्छ।
तपाईको मासिक आवर्ती दान सेट अप गर्न सजिलो छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईंको योगदानले हामीलाई जारी राख्न र हाम्रो रस्टिंग प्रोग्रामिंगको विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ, हाम्रो कामको साथ सहित मिसौरी मुख्य सडक जडान र अर्बनमेन पहल, को पुन: सक्रियण मार्क्वेट पार्क, हाम्रो अभियान हाम्रो छिमेकको व्यवसायहरु को लागी अतिरिक्त समर्थन प्रदान गर्न, र अधिक।
यद्यपि डीटी २ पूर्ण रूपमा स्वयंसेवी संचालित भैसकेको छ, २०२० मा हामी आंशिक स्टाफलाई काममा लगाउन सक्षम भएका छौं हाम्रो प्रयासलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्न। हाम्रो डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक कौशल र अनुभव ल्याउँदछ जुन हामीलाई अनुदानको लागि आवेदन दिन, स्वयम्सेवा बृद्धि गर्न, छिमेकको प्रवर्धन गर्न, र डचटाउन समुदायको सेवा जस्तो पहिले कहिल्यै सेवा पुर्‍याउन मद्दत गर्दछ। तपाईंको दिगो अनुदानले हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ जसमा हामी एक लचिलो र फ्रिभिंग डचटाउन बनाउँछौं। कृपया आज एक सम्हाल्ने दाता बन्नुहोस्.
डचटाउनमा अर्बनमेन ईनिसिएटिभ
अर्बनमेनका चार पोइन्टहरू (प्लस एक)
सुरक्षित सफा र हरियो
डीटी २ ले मिसौरी मेन स्ट्रीट र डचटाउन सीआईडी ​​सँग काम गर्न स्थापना गर्यो नयाँ समिति संरचना प्रत्येक पाँच बिन्दुमा मिल्दो। समितिहरू सबैका लागि खुला छन्। तपाईं अधिक पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा स्वयम्सेवा गर्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
DT2 सँग साझेदारी गरिएको छ मिसौरी मुख्य सडक जडान राज्यमा पहिलो पटकको जस्तो प्रकारको कार्यक्रममा। पहलले चार सूत्री दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछ जुन देशभरिका शहरहरूमा ऐतिहासिक डाउनटाउनलाई पुनर्जीवित गर्नमा सफल भएको छ र हाम्रो जस्तो शहरी छराहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाँचौं बिन्दु थप गर्दछ। पाँच बिन्दुहरू हुन् संगठन, आर्थिक जीवन, पदोन्नति, डिजाइन, र सुरक्षित सफा र हरियो।
मिसौरी मेन स्ट्रिटको साथ साझेदारी तीन वर्षको परियोजना हो जुन डाउनटाउन डचटाउनमा केन्द्रित छ जुन हाम्रो छिमेकको मूललाई ​​पुनर्जीवित गर्दछ र डीटी2लाई डचटाउन वरपरका क्षेत्रहरूमा लागू गर्न रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
सक्रिय मार्क्वेट पार्क
जबकि हाम्रा छिमेकीहरूसँग भेला हुने क्षमता COVID-१ by द्वारा सीमित थियो, डीटी २ ले अन्य डचटाउन संगठनहरूसँग मिलेर मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। मार्क्वेट पार्क गतिविधिहरु जस्तै चलचित्र रातहरू.
थप रूपमा, साझेदारीको साथ निर्माण गरिएको छ सेन्ट लुइस नयाँ मेजर लीग फुटबल टीम फुटबल क्षेत्रमा सुधारहरू प्रायोजित गर्न र २०२१ मा फुटसल अदालत निर्माण गर्न। Futsal फुटबलसँग सम्बन्धित छ तर सानो पिचमा खेल्दछ।
सामान्य जस्तो व्यापार होइन
डचटाउनले धेरै नयाँलाई स्वागत गर्‍यो र पुनर्निर्माण गरियो व्यवसायहरू पछिल्लो वर्ष मा। चलिरहेको स्वास्थ्य संकट र आर्थिक मन्दीको बावजुद उद्यमीहरूले डचटाउनमा उनीहरूको सपनाको अनुसरण गर्न पैसा र समय खर्च गरे।
शहरी खानाहरू तिनीहरूको reimagined साझा रसोई घर र पड़ोसी FoodHall अवधारणा शुरू। डिनरहरू शहरी ईटमा नयाँ भोजनालयहरू ओइरिएका छन्। जुआनिटाको क्रियोल सोल एउटा मोड़को साथ उनीहरूको आत्माको खानाको लागि आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त भएको छ। टाकोस ला जेफा तिनीहरूका इन्ट र मोर्टार ठाउँमा ग्राहकहरूको लाइनहरू सेवा गर्न तिनीहरूका घरपछाडिबाट बिरिया टाकोहरू सेवा गर्न गए। र पूर्ण रूपमा प्यास्ट्री बिहानको कफी, पेस्ट्री, र मिठाईहरू प्रदान गर्दछ, डचटाउनमा एक लामो लामो अनक्युपिड। डाउन भर्जिनिया एवेन्यू, शाई डोनट्सले छिमेकीमा बिहानको खाजा पनि ल्याउँदछ, र नयाँ आइरनमा नयाँ रेष्टुरेन्टमा ठाउँ पुन: सार्नको लागि पूर्व आयरन जौमा काम चलिरहेको छ।
हामीलाई डचटाउनमा व्यापार समर्थन गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
डीटी २ मा तपाईंको चन्दाले हामीलाई हाम्रो छिमेकको व्यवसायलाई आकर्षण गर्न, बढाउन, र बढावा दिन मद्दत गर्दछ। आज तपाईंको दिगो अनुदान बनाउनुहोस्.
डाउनटाउन डचटाउनमा नयाँ पसलहरू पनि आएका छन्। नयाँहरू पनि सामेल छन् क्वाम्बोका, लुगा, उपहार, र अन्य सामान बेच्ने पसल; मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस्, नयाँ महिला लुगा, सामान, र शरीर हेरचाह मा विशेषज्ञता; र मेलानिन मेड ब्यूटी, कपाल र सौन्दर्य उत्पादनहरू बेच्नका साथै पुन: बिक्री लुगाको दायरा। नयाँ नाई पसल र ब्यूटी सैलुन मेरामेकमा पनि खोलियो। र क्रस ग्रान्ड तिनीहरूको स्थापना नयाँ ईंट र मोर्टार स्थान। व्यवसाय, डचटाउन निवासीहरु द्वारा संचालित, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, घटना योजना, र अधिक प्रदान गर्दछ।
स्थापित व्यवसायहरू महामारीको माध्यमबाट अगाडि धकेल्छन्। डाउनटाउन डचटाउनले देख्यो डायना बुटीक Meramec मा एक ठूलो अन्तरिक्ष मा विस्तार र साथ टीम बचत $ #! & एक upstart व्यवसाय को लागी एक अवसर प्रदान गर्न। को मूल क्रूसो भोजनालय उनीहरुको th० औं वर्षमा सोल्डरीड गरिएको छ, क्यारोआउट र सीमित भोजन-भित्र बस्ने सीटीको लागि उनीहरूको क्लासिक्स बाहिर निकाल्दै। लोगानका बच्चाहरूको पुन: बिक्री प्रदान गर्दछ भर्चुअल किनमेल अवसरहरू आफ्नो ग्राहकहरु लाई। हाम्रो छिमेकको व्यवसायहरु एक परिवर्तन भैरहेको अवस्थामा अनुकूलन गर्न जारी राख्छ, हाम्रा छिमेकीहरुलाई आवश्यक पर्ने सामान र सेवाहरु प्रदान गर्दा उनीहरूको सुरक्षाको रक्षा पनि।
यद्यपि हाम्रो धेरै व्यवसायहरू महामारीको बेलामा स have्घर्ष गरिरहेका छन् (जसरी देशभरि व्यवसायहरू छन्), हामी यी धेरै जसो ठाउँहरू छिट्टै नै भरिएको देख्न पाउँदा उत्साहित छौं। उद्यमीहरू डचटाउनमा अवसर देख्दछन्, र हामी भविष्यमा हाम्रो छिमेकी व्यवसायहरू स्थापना भएको र नयाँ दुबैको लागि खुशी छौं।
डचटाउनमा तपाईलाई स्वागत छ, एक छिमेकको वजन
हाम्रो शहरको विगत र हामी आज को हो भन्ने सत्यतामा अग्लो छ। हामी सेन्ट लुइसको सब भन्दा जनसंख्या भएको र घने ठाउँ हो। हामी छिमेकमा छौं जुन बृद्धि, संकुचन र फेरि बृद्धि भएको छ। हामी डचटाउन प्राइड हौं.
हामी सेन्ट लुइसको सबैभन्दा विविध, धूर्त, र अगाडि सोच्ने इलाका मध्ये एकको हिस्सा हुन पाएकोमा गर्व गर्दछौं। यहाँ समृद्धि खोज्न गर्व छ। हामी डचटाउन घर किन भन्छौं श the्कास्पदहरूलाई बताउन गर्व छ।
एक स्थायी दाता बन्नुहोस्
एक साथ तपाइँको डचटाउन प्राइड देखाउनुहोस् आवर्ती मासिक दान DT2 लाई। सतत दाताहरूले निःशुल्क डचटाउन प्राउद यार्ड साइन पाउनुहोस्!
हामी डचटाउनलाई छनौट गरेर घर भन्छौं। हामी सँगै आउने र छिमेकीहरूसँग समुदाय बनाउने छनौट गर्दछौं जुन उनीहरूको जीवन जस्तो देखिन वा उनीहरूको जीवन एकै खालका नहोलान्। हामी हाम्रा छिमेकीहरूका डचटाउन छनौट गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दछौं, उनीहरू जोसुकै छन्, उनीहरू कसलाई मन पराउँछन्, उनीहरू के जस्तो देखिन्छन्, जीवनयापनको लागि के गर्छन् वा कुन परिस्थितिले उनीहरूलाई यहाँ ल्यायो।
२०२० लाई किकऑफ चिह्नित गरियो डचटाउन गर्व वरिपरि अभियान। को अनुदान संग सेन्ट लुइस समुदाय संगठनहरूको एसोसिएशन (स्लाको), हामीले छाप्यौं र सयौं यार्डका चिह्नहरू वितरण गर्‍यौं जुन समुदायमा छिमेकको गौरव र एकता देखाउनको लागि।
हामीले डचटाउनमा बासिन्दाहरू र व्यवसाय मालिकहरू भएकोमा हामी गर्व गर्दछौं भनेर हाईलाईट भिडियो पनि प्रस्तुत गर्‍यो। तपाईं मा भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/proud.
२०२१ र पछाडि ठूलो योजनाहरू
DT2 र डचटाउन छिमेकको अभूतपूर्व चुनौतिहरूको बाबजुद सफल २०२० थियो। लगानी बृद्धि हुँदैछ, छिमेकमा चासो उच्च छ, र हामीसँग आउँदो बर्षहरूमा डचटाउनमा एक जीवन्त र न्यायसंगत समुदाय निर्माण गर्न हामीसँग एक उत्कृष्ट आधारशिला र साझेदारहरू छन्। तर हाम्रो काम भर्खर सुरु भएको छ।
२०२१ मा र यस भन्दा पछाडि हाम्रो अभियान जारी राख्न मद्दतको लागि हामी तपाईंको सहयोगको लागि अनुरोध गरिरहेका छौं। Monthly १०, $ २,, वा $ of० को मासिक योगदानले हामीलाई डचटाउनमा संसाधनहरू र पुनर्निवेश ल्याउन र हाम्रो सबै बासिन्दाहरू र व्यवसाय मालिकहरूको लागि उज्जवल भविष्यको योजना बनाउन मद्दत गर्दछ। आज एक स्थायी दाता बन्नुहोस्.
2 को लागि DT2021 एजेन्डा
यो अर्बनमेन पहल तीन बर्षको प्रोजेम हो जुन अवधिमा हामी मिसूरी मेन स्ट्रीट जडानमा पेशेवर स्टाफसँग with + १ पोइन्ट दृष्टिकोण लागू गर्नका लागि काम गरिरहेका हुनेछौं। मा अधिक जान्नुहोस् dutchtownstl.org/urbanmain.
२०२० को अन्तमा, हामीले नयाँ प्रयासहरू गर्न सुरु गर्यौं नयाँ र अवस्थित डचटाउन व्यवसायमा पुग्नुहोस् बिक्री ड्राइभ गर्न र जानकारी प्रदान गर्न। हामी हाम्रो डिटि २ पनि सुरु गर्दछौं घन्टा कार्यक्रमहरू भन्दा पहिले — कफि घण्टा जसले हाम्रो व्यवसाय मालिकलाई भेट्नका लागि मौका दिन्छ, नेटवर्क, र स्रोतहरू साझा गर्न। तपाइँ यहाँ मा अधिक पाउन सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ व्यवसाय.
DT2 घण्टा पछि
डीटी २ घण्टापछि, हाम्रो मासिक आनन्दमय घण्टा छिमेकी व्यवसायको समर्थनमा २०२१ को वसन्त willतुमा फेरि सुरु हुनेछ। सुरक्षा प्राथमिकताका साथ चिन्ताको विषय बनेको छ, हामी विश्वास गर्दछौं कि यो अझै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले आफ्नो समुदायलाई एकसाथ ल्याउने र हाम्रो नयाँ र ध्यान केन्द्रित गर्नु जारी राख्नु आवश्यक छ। स्थापित व्यवसायहरू। हाम्रो नजर राख्नुहोस् डचटाउन क्यालेन्डर अधिक समय पछि र अन्य घटनाहरूको लागि।
हामीले ग्रीष्मको तेस्रो वर्षको लागि योजना पनि शुरू गरिसकेका छौं मार्क्वेट पार्कमा फिल्म रातहरू। हाम्रो चलचित्र नाइट्सले परिवार मैत्री मनोरन्जन, फूड ट्रक, समुदाय आयोजना, र अधिकको लागि सयौं छिमेकीहरू पार्कमा ल्याए। मा हाम्रो तालिका हेर्नुहोस् dutchtownstl.org/movienight.
डचटाउन संगठनहरूको साथ सहयोग
DT2 सँगसँगै कार्य गर्न जारी राख्नेछ डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला हाम्रो छिमेकीको बीचमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण कोरिडोरलाई बढावा दिन र सुधार गर्न। गठन गर्न मद्दत पछि सीआईडी २०१ 2017 मा, हामी पूर्वाधार सुधार र सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण, र पदोन्नतिको लागि नयाँ रणनीतिहरूको विकासको साथ हाम्रा प्रयासहरू सफल भएको हेर्न हामी गर्व गर्दछौं।
यो छिमेकी इनोवेशन केन्द्र पछिल्लो बर्षमा अमूल्य पार्टनर रहेको छ, बाहिरका घटनाहरूको लागि सुरक्षित जम्मा गर्ने ठाउँ, टाढाको मिटिंगहरू टेक्नोलोजी गर्ने, र डचटाउनको डे फेक्टो समुदाय केन्द्र बन्नको लागि उनीहरूले आफ्नो दीर्घकालीन संगठनात्मक लक्ष्यहरूको विकास गर्न जारी राखेका छन्। को एनआईसी डचटाउनमा समुदाय निर्माणको अभिन्न हिस्सा हुनेछ।
हामी हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने पनि लक्ष्य राख्छौं डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन किनकि उनीहरूले नेतृत्वको स transition्क्रमणको दौरबाट गुज्रिरहेका छन जबकि उनीहरूले बासिन्दालाई सशक्त बनाउन, सस्तो सस्तोमा आवास दिन, र कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू जारी राख्छन् Gravois जेफरसन ऐतिहासिक पड़ोसी योजना.
जस्तै थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, रोजगार जडानर क्युर हिंसा कार्यक्रम, साथै हाम्रो छेउछाउका स्कूलहरू र मण्डलीहरू र हाम्रा निर्वाचित अधिकारीहरू सबैले आवासीय तथा व्यवसायिक मालिकहरूको छेउमा टेबुलमा एउटा सीट राख्नेछन् ताकि यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि हाम्रो काम भित्री आवाजबाट आएको विभिन्न प्रकारबाट निर्देशित हुनेछ। डचटाउन समुदाय।
समर्थन DT2 आज!
DT2 लामो shoestring बजेट र स्वयंसेवक कर्मचारीहरु संग संचालित छ। यो वर्ष, हामी हाम्रो कामलाई अर्को तहमा लैजान आशा गर्दछौं।
हाम्रो नयाँ डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक र मिसौरी मेन स्ट्रीट जडान जस्ता संगठनहरूसँग हाम्रो कामको साथ, अवसरहरू र संसाधनहरू जुन पहिले हामीसँग उपलब्ध थिएनका दृश्यमा छन्।
तर अहिले, हामीलाई मार्केटिंग, घटनाहरू, र अन्य आउटरीच मार्फत समुदाय निर्माण गर्ने र डचटाउन वरपरको प्रचार गर्ने हाम्रो जारी कार्यलाई जारी राख्न धनको आवश्यकता छ।
DT2 को २०२१ कोष स .्कलन लक्ष्य: चन्दा चन्दामा १०,००० डलर
हामीले यसको समर्थन तपाइँको DT2 - डाउनटाउन डचटाउनको लागि जारी राख्न सजिलो बनाएका छौँ। केवल जानुहोस् dutchtownstl.org/donate जहाँ तपाईं एक बनाउन अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ आवर्ती वा एक पटक दान। पुनरावर्ती दानहरू स्वचालित रूपमा तपाईंको खाताबाट मासिक डेबिट हुनेछ।
२०२१ को लागि लगभग $,००० डलर प्रतिबद्ध गरिसकेका, हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौं जब २ more जना व्यक्तिले महिनामा $ २ don दान गर्दछन्। तर कुनै पनि रकममा दिइएका योगदानहरूलाई धेरै सराहना गरिन्छ र DT2 लाई एक बढ्दो समुदायको प्रवर्धन गर्ने हाम्रो महत्वपूर्ण मिशन जारी राख्न र डचटाउनको लागि आर्थिक विकास र सहयोग अवसरको बढ़ावा प्रदान गरी साझा समृद्धिको लागि मद्दतको लागि लामो यात्रा गर्नुहोस्।
हामी अझै चेकमार्फत चन्दा स्वीकार्छौं। तपाईं आफ्नो चेक डीटी २, 2२०3207 मेरामेक स्ट्रीट, सेन्ट लुइस, MO 63118 XNUMX१XNUMX मा पठाउन सक्नुहुन्छ।
तल दायर गरिएको DT2. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. Covid-19, DT2, डचटाउन, डचटाउन व्यापार शोकेस, कोष स .्कलनकर्ता, मार्क्वेट पार्क, र अर्बनमेन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 15th, 2022 .
डचटाउन STL.org DT2 महामारी र पछाडि एक शक्तिशाली डचटाउन